ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းဆိုင်ရာအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်မှုများကို Meta-analysis သည် - လူ ဦး ရေလေ့လာမှုများ (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့် General ပြည်သူ့အင်အားလေ့လာရေး (2015) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်တမန်တော်တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း
ရှင်ပေါလုဂျေ Wright1, *ရောဘတ်အက်စ် Tokunaga2 နှင့်အက်ရှလေ Kraus1
အပိုဒ်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ: 29 DEC 2015
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော Correlate ရှိမရှိငြင်းခုံခံရဖို့ရောက်နေပါတယ်။ စမ်းသပ်လေ့လာမှု meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်သဘောထားများအပေါ်သက်ရောက်မှုတွေ့ပြီ။ စားသုံးမှုသဘာဝလေ့လာမှုများအတွက်ပြင်းထန်တဲ့သဘောထားတွေနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်အဲဒီညစ်ညမ်းကိုလည်းတွေ့ရှိရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးမရှိ, Meta-analysis သည်အလုပ်၏ဤခန္ဓာကိုယ်လှုံ့ဆျောမှုဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းထားပါတယ်: ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်ကျူးလွန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းပါသလား 22 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ7လေ့လာမှုများဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ စားသုံးမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတို့တွင်အများနှင့် Cross-Section နှင့် longitudinal လေ့လာမှုများအတွက်နိုင်ငံတကာကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျူးကျော်များနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ နှစ်ဦးစလုံးသိသိသာသာခဲ့ကြသည်ပေမယ့်အသင်းအဖွဲ့များ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ထက်နှုတ်များအတွက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များ၏ယေဘုယျပုံစံအကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာတစ်ခုပိုမိုဆိုးဝါးအချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။
keywords: အကြမ်းဖက်မှု; ကျူးကျော်; ညစ်ညမ်း; လိင်ကအကဲဆတ်သောမီဒီယာ; meta-အားသုံးသပ်ခြင်း
ဇန်နဝါရီလ 5, 2016 | by: Neelam
porn စွဲသင်ဟာလိင်တက်ကြွစေနိုင်သလား - လေ့လာ
သင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုနှစ်သက်ပါသလား? သငျသညျညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သည့်အချိန်အများစုကိုဖြုန်းသလား? တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ် porn စွဲသင်လိင်ကရန်လိုစေနိုင်သည်ကြောင်းအကြံပြုထားပါတယ်အဖြစ်ပြုလုပ်လုပ်နေတာရပ်တန့်။
အဆိုပါလေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်များညစ်ညမ်းစားသုံးမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သူနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းထောက်ပြ။ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်တွေ့ရှိချက်ခုနစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ 22 လေ့လာမှုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဆင်းသက်လာကြသည်။
လေ့လာမှုနှုတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုစလုံး၏စည်းကမ်းချက်များ၌သိပ်အရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာစားသုံးခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏လုပ်ရပ်များကျူးလွန်အကြားပိုမိုအားကောင်း link ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်ကအသင်းအဖွဲ့များနှုတ်ကျူးကျော်များအတွက်ပိုပြီးသိသာခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ပေမယ့်။
အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်နှင့် Manoa မှာဟာဝိုင်ယီတက္ကသိုလ်မှသုတေသီများ, 22 လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာအချက်အလက်များ၏တစ်ဦး Meta-analysis သည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်လိင်ရရှိရန်အင်အားသုံးသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်မှုများအသုံးပြုခြင်းများအပါအဝင် porn စားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏လုပ်ရပ်များ၏ Self-အစီရင်ခံစာများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်ကျူးလွန်တစ်ခုတိုးလာဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် "တွေ့ရှိခဲ့ ။ "
သူတို့က, သို့သော်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အကြောင်းတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လွယ်ကူပြီးအများအပြားညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်လိင်ရန်လိုမဟုတ်ကြောင်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
သို့သော်လေ့လာမှုစာရေးဆရာများနောက်ဆုံးမှာစုဆောင်းဒေတာပျမ်းမျှအပေါ် ပို. မကြာခဏညစ်ညမ်းလောင်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီလောင်ဘူးသောသူတစ်ဦးချင်းစီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ရန်အထောက်အကူသဘောထားတွေကိုကိုင်ထားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်ပြုမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုများပါတယ်, ထိုနည်းနည်းသံသယထားခဲ့ပါ "ကောက်ချက်ချ ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်သူကိုလျော့နည်းမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးကြသည်။ "
အားလုံးကတော့သုတေသီသော်လည်း, နိဂုံးဖို့သဘောတူကြပါတယ်။ ခရစ်ဖာဂူဆန်, ကိစ္စကိုလက်ရှိလေ့လာမှုရဲ့အထောက်အထားများကိုတွေ့လေ့လာခဲ့ခဲ့သူ Stetson တက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာ၏တွဲဖက်ပါမောက္ခ, "Non-လာအောင်။ "
"ကျွန်မဆင်းသည်ငါ့နှစ်ဆယ်ဒေါ်လာထားသွားနဲ့ကျွန်မဖြစ်ကောင်းဤစာရေးသူရှိသည်အတူတူဒေတာများကိုအသုံးပြုသည်အခြား variable တွေကိုအဘို့အထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဘာမျှမရှာနိုင်ဟုပြောတယ်" ဟုအဆိုပါအတိတ်၌သူ၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနအတွက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ဖာဂူဆန်ကလည်း, အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတက်သွားပြီနှင့်အတင်းအဓမ္မလိင်၏နှုန်းထားများအမှန်တကယ်ဆင်းကျဆင်းသွားပါပြီ။
ဖာဂူဆန်ပေမယ့်ဤပြဿနာအပေါ်အငြင်းအခုန်အချိန်မရွေးမကြာမီသေဖို့မထင်ထားဘူးကား, မိမိလူဦးရေ-Level ချဉ်းကပ်မှုလွန်ကဲအပြုအမူတွေအပေါ် Self-အစီရင်ခံဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိလေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်ထက်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင်းစောဒကတက်သည်။
"ဒီ ping ရဲ့-Pong နောက်ကျောနှင့်ထွက်-One လေ့လာမှုတစျခုအရာနောက်ထပ်လေ့လာမှုအခြားအရာကပြောပါတယ်ပြောပါတယ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုပါပဲ" ဟုသူကပြောသည်။ "ဒါဟာဆယ်စုနှစ်များစွာပေါ်သွားပြီရဲ့တစ်ဦးအငြင်းအခုန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဆယ်စုနှစ်များစွာပေါ်မယ့်ဆက်လက်သွားပါတယ်။ "